Romance – Family Of Films
Come Back Mister (2016) Korea TV Series မြန်မာစာတန်းထိုး
Come Back Mister (2016) Korea TV Series မြန်မာစာတန်းထိုး ကဲ ကိုရီးယားချစ်သူများအတွက် ကြိုက်နှစ်သက်မယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတစ်ကားကို FOF (family of films) က ထပ်မံတင်ဆက်လိုက်ပါရစေဦးခင်ဗျာ… Come Back Mister (2016) Korea TV Series သည် AsianWiki 90% Google users 93% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Shin Yoon-Sub က ရိုက်ကူးထား၍ Jiro Asada ရဲ့ ဝတ္ထုကို Noh Hye-Young က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Rain, Oh Yeon-Seo , Lee Min-Jung တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Romance ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ သေကြောင်းကြံစည်ခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် ...
The Last Song (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Last Song (2010) မြန်မာစာတန်းထိုး Miley Cyrus ကို ကြွေသူများအတွက် ဇာတ်ကားလေးပါ… The Last Song (2010) သည် IMDb 5.9/10 Roger Ebert 2.5/4 Google users 93% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Julie Anne Robinson က ရိုက်ကူးထား၍ Nicholas Sparks, Jeff Van Wie တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Miley Cyrus, Liam Hemsworth, Greg Kinnear တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Drama, Music, Romance ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ပေကပ်ကပ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို သူ့အဖေရှိရာ တောင်ပိုင်းကမ်းခြေကို အပို့ခံရလေသည် သူတို့ရဲ့ ဂီတချစ်မြတ်နိုးမှုဟာ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲ ...
Goal! The Dream Begins (2005) မြန်မာစာတန်းထိုး
Goal! The Dream Begins (2005) မြန်မာစာတန်းထိုး ဘောလုံးအားကစားချစ်သူများအတွက် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ကားပေါ့ဗျာ… Goal! The Dream Begins (2005) သည် IMDb 6.7/10 ရထားသော ဒါရိုက်တာ Danny Cannon က ရိုက်ကူးထား၍ Mike Jefferies, Adrian Butchart တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Kuno Becker, Alessandro Nivola, Anna Friel တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Drama, Romance, Sport ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ထူးခြားပြီး ပါရမီရှိတဲ့ ဘောလုံးသမား စန်တီယာဂို မြူးနက်ဇ်ဟာ နယူးကာဆယ်အသင်းမှာ ဘယ်လို ပရော်ဖက်ရှင်ကစားသမားဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့ အခွင့်အရေးရသွားပုံကို ဇာတ်လမ်းမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ကြပါခင်ဗျာ… Reviewed by Win Kyaw Thu Fixed by DMO Entertainment Encoded ...
My Love Eun Dong TV Series (2015– ) မြန်မာစာတန်းထိုး
My Love Eun Dong TV Series (2015– ) မြန်မာစာတန်းထိုး My Love Eun Dong TV Series (2015– ) သည် AsianWiki 92% IMDb 7.5/10 Google users 93% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Lee Tae-Gon က ရိုက်ကူးထား၍ Baek Mi-Kyeong က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Spencer Sa-rang Kim, Jin-mo Ju, Sung-Hyun Baek တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Romance ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. လူငယ်ဘဝမှာ Ji Eun Ho ဟာ Ji Eun Dong နဲ့ မတော်တဆ တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနေတတ်သော သူ့ကို ...
The Notebook (2004) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Notebook (2004) မြန်မာစာတန်းထိုး အချစ်ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်းကြည့်ပြီး ရိုချင်သူများအတွက် ဖီးလ်ချင်သူများအတွက်ပါ… The Notebook (2004) သည် IMDb 7.9/10 Rotten Tomatoes 52% Metacritic 53% Google users 91% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Nick Cassavetes ရိုက်ကူးထား၍ Jeremy Leven, Jan Sardi တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Gena Rowlands, James Garner, Rachel McAdams တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Drama, Romance ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. အရမ်းဆင်းရဲတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ အရမ်းချမ်းသာတဲ့ အမျိုးသမီးယောက် ချစ်ကြိုက်ကြတယ် အမျိုးသမီးကို လွတ်လပ်တဲ့အရသာကို သူက ပေးနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ လူအဆင့်အတန်းကွာခြားမှုကြောင့် မကြာခင်မှာ ခွဲခွာလိုက်ရတဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်ကြဦးမလဲ.. Reviewed ...
Humko Deewana Kar Gaye (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး
Humko Deewana Kar Gaye (2006) မြန်မာစာတန်းထိုး Humko Deewana Kar Gaye (2006) သည် IMDb 5.3/10 Google users 81% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Raj Kanwar ရိုက်ကူးထား၍ Sudhanshu Dube, Raj Kanwarတို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်း ရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Akshay Kumar, Katrina Kaif, Bipasha Basu တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Drama, Romance ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Ravishing Jia A. Yashvardhan ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဟာ အရမ်းချမ်းသာပေမယ့် အထီးကျန်ဆန်တဲ့ဘဝနဲ့ သူရဲ့အဖေ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင် A.J. Yashvardhan နှင့် အိန္ဒိယမှ နေခဲ့ရသည် စီးပွားရေး ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက် ဖခင်ဖြစ်သူက ...
Ishqedarriyaan (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Ishqedarriyaan (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး Ishqedarriyaan (2015) သည် IMDb 5.1/10 Google users 89% ရထားသော ဒါရိုက်တာ V.K. Prakash က ရိုက်ကူးထား၍ Dheeraj Rattan တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Mimoh Chakraborty, Kavin Dave, Mohit Dutta တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Romance ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Ishqedarriyaan ဆိုတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ စွန့်လွှတ်မှု မိသားစု တန်ဖိုး နဲ့ ဆယ်နွှယ်မှုရဲ့ တန်ဖိုးကို ပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ Rishteydarriyaan ဆိုတာ ဆက်နွှယ်မှုပါ Ishqedarriyaan ဆိုတာက ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ဆက်နွှယ်မှုခေါ်ပါတယ် သရုပ်ဆောင် Mahaakshay Chakraborty, Evelyn Sharma နဲ့ Mohit Dutta ...
1921 (2018) မြန်မာစာတန်းထိုး
1921 (2018) မြန်မာစာတန်းထိုး family of fims မိသားစုရဲ့ ချစ်ပရိသတ်အတွက် နောက်ထပ် update ကားလေးတစ်ကား ကြိုးစားတင်လိုက်ရပါကြောင်း…. 1921 (2018) သည် IMDb 4.6/10 Times of India 2/5 Google users 81% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Vikram Bhatt က ရိုက်ကူးထား၍ Vikram Bhatt, Esha Desai တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Zarine Khan, Karan Kundrra, Manjit Singh တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Horror, Romance, Thriller ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ထူးခြားတဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်လှုပ်ရှားမှုများကို အရမ်းရက်စက်ပြီး ကျိန်ဆာမိနေတဲ့ ဝိညာဉ်တစ်ခုကြောင့် ဖြစ်ပျက်လာတော့ ဖြစ်ရပ်ဆန်းများကို Ayush နဲ့ ...
Pyaar Kiya To Darna Kya (1998) မြန်မာစာတန်းထိုး
Pyaar Kiya To Darna Kya (1998) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.8/10 Google Users 80% Comedy, Drama, Romance 2h 42min Pyaar Kiya To Darna Kya (1998) သည် IMDb 6.8/10 Googluse User 80% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Sohail Khan ရိုက်ကူးထား၍ Sanjeev Duggal, Sohail Khan တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Salman Khan, Kajol, Arbaaz Khan တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Drama, Romance ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. မိဘမဲ့အနေနဲ့ နေရတာကောင်မလေးတစ်ယောက် သူ့အစ်ကိုနဲ့ သူ့ဦးလေးက သူ့ အရိပ်တကြည့်ကြည့်ကြည့်ကာ တော်ရုံလူနဲ့ သဘောမတူ လက်ထပ်မပေးနိုင်ကြပေ ထိုကောင်မလေးက မြို့ကို ...
Vanilla Sky (2001) မြန်မာစာတန်းထိုး
Vanilla Sky (2001) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.9/10 Rotten Tomatoes 42% Roger Ebert ¾ Google User 84 % Genre: Fantasy, Mystery, Romance Run Time:2hours 16 mins Vanilla Sky (2001) သည် IMDb 6.9/10 Rotten Tomatoes 42% Roger Ebert ¾ Google users 84% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Cameron Crowe ရိုက်ကူးထား၍ Alejandro Amenábar, Mateo Gil တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်း ရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Tom Cruise, Penélope Cruz, Cameron Diaz တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Fantasy, Mystery, Romance ဇာတ်ကားကောင်း ...
Source Code (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး Source Code (2011) သည် IMDb 7.5/10 Rotten Tomatoes 91% Roger Ebert 3.5/4 Google users 93% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Duncan Jones က ရိုက်ကူးထား၍ Ben Ripley က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Mystery, Romance, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. စစ်သားတစ်ယောက်ဟာ တခြားသူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ နိုးထလာက သူသည် ခရီးသည်ရထားတစ်စင်းရဲ့ ဗုံးထောင်သူကို ရှာဖွေရန်အတွက် အစိုးရအစီအစဉ်တစ်ခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုသာ သိရှိလိုက်ရသည် စစ်ဆင်ရေးပြီးဆုံးရာ ၈ မိနစ်သာ လိုတော့သည်ကို သိရှိလိုက်ရသောအခါ ဘယ်လိုတွေ ...
Run (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Run (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Run (Tamil) လူတွေက အမှားမလုပ်ကြဘူး ဒါပေမဲ့ အခြေအနေရဲ့တွန်းအားအရ အမှားလုပ်မိကြတယ် တဲ့။ ဒီလိုပဲ ဒီဇာတ်ကားလေးမှာလည်း ငွေကြေးလိုအပ်လာတဲ့ မှားမှန်းသိလျက် အရင်းရှင်တွေနဲ့ ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားတွေကြား အမှားတွေ ဖြစ်လာတယ်။ လူတိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ အမှားမျိုးဆိုပေမဲ့ လက်မခံနိုင်တဲ့ အရင်းရှင်တွေကတော့ ဖိအားပေးတော့တာပဲ။ အခက်အခဲတွေ ရှောင်ကြရင်း... ပြေးလွှားကြရင်း... ဘဝဆိုတာ တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးမှာဆိုရင်.... အကြွေးလာတောင်းနေတဲ့ သူဌေးကြီးရယ်.. အလုပ်လက်မဲ့ မင်းသားချော sundeepရယ်၊ အလုပ်မရှိလို့ သဘောမတူတဲ့ ယောက္ခမလောင်းရယ်.. ဒါပေမဲ့ ပြဿနာတွေအားလုံးက အရင်းရှင်တစ်ယောက်အပေါ်ပဲ ကြုံတွေ့နေကြပြီး.... ဘယ်လို ရုန်းကန် ရှောင်ထွက်ကြမလဲဆိုတာကို ကြည့်ပေးကြပါဦး။ Review &Translated by Min Thit Tant Maung Encoded by Thet Paing Oo 720p HD 370 MB (openload) 720p HD 750 MB (openload) 720p HD 370 MB (soliddrive) 720p HD 750 MB (soliddrive)
Emergency Couple Korea TV Serires(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Emergency Couple Korea TV Serires(2014) မြန်မာစာတန်းထိုး AsianWiki 92% IMDb 7.6 Google users 94% Emergency Couple Korea TV Serires(2104) သည် AsianWiki 92% IMDb 7.6 Google users 94% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Kim Cheol-Kyu ရိုက်ကူးထား၍ Choi Yoon-Jung ကဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Kirsty Averton, Nicky Henson, James Rose : Ji-hyo Song, Choi Jin-Hyuk, Pil-mo Lee တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Drama, Romance ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Network: tvN Episodes: 21 Release Date: January 24 - April 5, ...
Yeh Hai Jalwa (2002) မြန်မာစာတန်းထိုး
Yeh Hai Jalwa (2002) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 4.8/10 Google Users 84% မိခင် ဖခင်မေတ္တာကို ငတ်မွတ်နေသူများ ဘယ်လောက်ထိ ခံစားရတယ်ဆိုတာကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ Salman Khan ရဲ့ မေတ္တာဘွဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါခင်ဗျာ… Yeh Hai Jalwa (2002) သည် IMDb 4.8 Goggle USers 84% ရထားသော ဒါရိုက်တာ David Dhawan က ရိုက်ကူးထားကာ Rumi Jaffery(စကားပြော), Imtiaz Patel တို့ကဇာတ်ညွှန်းရေးသားသရုပ်ဆောင် Rishi Kapoor, Salman Khan, Ameesha Patel တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Drama, Romance ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Raj Saxena (Salman Khan) သည် လန်ဒန်ကို သူ့ရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေသော ...
Baghban (2003) မြန်မာစာတန်းထိုး
Baghban (2003) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 7.5/10 Google User 84 % Genre: Drama, Romance Run Time:3hours 1 mins "……ဥယျာဉ်မှူးဆိုတာ ဥယျာဉ်တစ်ခုကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့သူ ဖခင်ဆိုတာလည်း မိသားစုတစ်ခုကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့သူပဲ နှစ်ဦးစလုံးဟာ သူတို့ရဲ့သားသမီးအပင်ပျိုလေးတွေကို သွေးချွေးတွေနဲ့စောင့်ရှောက်ထိန်းကျောင်းရတယ် သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့သစ်ပင်လေးကိုတင်မကဘဲသစ်ပင်လေးရဲ့ အရိပ်ကိုပါ ချစ်ကြတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူမျှော်လင့်တာက ဘ၀ရဲ့နေ၀င်ချိန်ရောက်တဲ့အခါအဲဒီအရိပ်ကြောင့် သက်သာရာရလိမ့်မယ်ပေါ့ ကမ္ဘာမြေကြီးက သက်တမ်းရှည်တယ် ကောင်းကင်ကလည်း မိုးရွာနေတယ် ရာသီတွေအလီလီပြောင်းတိုင်း ဥယျာဉ်မှူးဟာ ဥတုရာသီတစ်ခုချင်းနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် သင်းရနံ့တွေကိုလိုက်ဖက်ရာရွေးချယ်ပြီး သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာ ထွေးပွေ့ပျိုးထောင်တယ် ဥယာဉ်မှူးဟာ ဥယျာဉ်ထဲက ပန်းပွင့်တိုင်းကို သူ့ရဲ့အသွေးအသားလို သဘောထားတယ် ဥယာဉ်မှူးဟာ ဥယျာဉ်ထဲက ပန်းပွင့်တိုင်းကို သူ့ရဲ့အသွေးအသားလို သဘောထားတယ် အချိန်တိုင်းမှာ တစ်ရွက်ချင်း တစ်ကိုင်းချင်းဆီကို စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပြီး ဥယျာဉ်တစ်ခုကိုဖန်တီးတယ် ဥယျာဉ်မှူးဆိုတာ ဘုရားသခင်လိုပဲ……" Baghban (2003) သည် IMDb 7.5 Goggle USers 84% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Ravi Chopra ရိုက်ကူးထားကာ Shafiq Ansari , Satish Bhatnagar တို့ကဇာတ်ညွှန်းရေးသားသရုပ်ဆောင် Amitabh Bachchan, Hema Malini, Aman ...
Dil (1990) မြန်မာစာတန်းထိုး
Dil (1990) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.8/10 Google User 65 % Genre: Comedy, Drama, Romance Run Time:2hours 52 mins အချစ်ကို ရောင်းကုန်တစ်ခုလို ရောင်းစားသောအခါ…. " သူ့အစား ကျွန်တော်ပဲ သေသွားချင်တယ်ဗျာ နိုး သား အဲ့ဒီလို မပြောပါနဲ့ - သားကို မထိနဲ့ဗျာ ဒါပေမယ့် သား သားလို့ ခေါ်ရဲ သေးရင် သားကို ထိနေရင် ဒါပေမယ့် သား သားအတွက် ဒါတွေ အားလုံး ဖေဖေ လုပ်ခဲ့တာပါ ကျွန်တော့်အတွက် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ, Mr. Hazari prasad ကျွန်တော်က ခင်ဗျားအတွက် ဘာလဲ ရောင်းကုန်ကြီးလား ကျွန်တော့်ကို ရောင်းစားတာကလွဲ ဘာလုပ်တတ်လို့လဲ ခင်ဗျား ကျွန်တော့်ကို ဒီလိုလုပ်ဖို့ မွေးထားတာ မဟုတ်လား ဆိတ်သတ်သမားက ဆိတ်ကလေးကို ကျွေးမွေးသလိုပေါ့ဗျာ သူက ဆိတ်ကို ရောင်းစားဖို့ပဲလေ….." Dil (1990) သည် IMDb 6.8 Google User ...
Run (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Run (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 4.7/10 Google User 90 % Genre: Action, Romance, Thriller Run Time: 1 hour 30 mins Run (2013) သည် IMDb 4.7 Google User 90 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ Simone Bartesaghi ကိုယ်တိုင် ရေးသား ရိုက်ကူးထား၍ Joseph Michael Lagana က ထပ်မံစိတ်ကူးပေါင်းထည့်ထား၍ သရုပ်ဆောင် William Moseley, Kelsey Asbille, Edoardo Ballerini တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Romance, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. RUN ဟာ တကယ့် သည်းထိတ်ရင်ဖို အက်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားပါ လမ်းမပေါ်က ၁၇ နှစ်ရွယ် Daniel နဲ့ သူလေ့ကျင့်ပေးသူ ...
Refugee (2000) မြန်မာစာတန်းထိုး
Refugee (2000) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 5.5/10 Google User 75 % Genre: Drama, Musical, Romance Run Time:3hours 27 mins "………ဒါပေမယ့် ဒီမှာ ဒီကလေးက အိန္ဒိယရောပါကစ္စတန်ရောမှာ မွေးတာ မဟုတ်ဘူး နိုင်ငံတကာ နယ်စပ်လို့လည်း ခေါ်တယ် ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မလဲ ဒီကလေးက အိန္ဒိယလား ပါကစ္စတန်လား ဘာမှမဟုတ်ဘူး ဒါမမဟုတ် နစ်ခုလုံးပဲ ဒါမှမဟုတ် ကမ္ဘာနိုင်ငံသားဖြစ်မယ် ဟုတ်တယ် အချစ်တွေနဲ့ မွေးလာတာ သူဖာသာ နေရာတစ်ခု လုပ်လိမ့်မယ် အကန့် အသတ်မရှိတဲ့မြေ ဝင်တာ ထွက်တာ ကန့် သတ်မှုမရှိတဲ့မြေ သူရဲ့နိုင်ငံက လူသားနိုင်ငံလို့ ခေါ်မယ်…." Refugee (2000) သည် IMDb 5.5 Google User 75 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ J.P. Dutta ကိုယ်တိုင် ရေးသား ရိုက်ကူးထား၍ သရုပ်ဆောင် Jackie Shroff, Sunil Shetty, Abhishek ...
It’s Okay , That’s Love ( 2014 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
It's Okay , That's Love ( 2014 ) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 8.4/10 Google Users 95% 2014 ရဲ့ Excellent K.Drama တစ်ခုအဖြစ် rating အမြင့်ဆုံးနဲ့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ ❤ It's Okay That's Love ❤ Drama ရဲ့ MainLead နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုရီးယားရဲ့ထိပ်တန်း Actor Actress Jo In Sung နဲ့ Gong Hyo Jin သာမက ပါဝင်ကြတဲ့ D.O ( EXO ) , LeeKwangSoo , LeeSungKyung , SungDongIl စတဲ့ supporting actors များစွာပါမကျန် Best Award များစွာ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ရပြီး Best OST Award , Special Award စတဲ့ Award အသီးသီးကိုပါ အထိုက်တန်ဆုံး ပိုင်ဆိုင်ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ ❤ It's Okay That's ...
Kaanchi: The Unbreakable (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Kaanchi: The Unbreakable (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး Kaanchi (2014) သည် Google User 82% ဒါရိုက်တာ : Subhash Ghai ကိုယ်တိုင်ရေးသား ရိုက်ကူးထား၍ သရုပ်ဆောင် Kartik Aaryan, Mishti, Rishi Kapoor တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Drama, Musical, Romance ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. နိုင်ငံတစ်ခုလုံးရှိ တရားမမျှတမှုတွေ တော်လှန်နေကြတဲ့ လူငယ်တွေ တစ်သန်းထဲက တစ်ယောက်အဖြစ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ တကယ့်စိတ်စွမ်းအားကို ပြသလိုက်သော ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ခံစားကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးခင်ဗျ…. Review By Win Kyaw Thu Translated By Zin Aung Encoded By Thet Paing Oo 720p HD 500 MB (openload) 720p HD 1 GB ...
Pee Mak (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Pee Mak (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 7.4/10 Google User 93 % Genre: Comedy, Horror, Romance Run Time:2hours 20 mins ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ အားလုံးလည်း သိပြီး ကြည့်ပြီးပါပြီ ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့သူများအတွက် နဲ့ ကျွန်တော်တို့ page မှာရှိသင့်တယ်ထင်လို့ တင်လိုက်တာပါခင်ဗျာ.. Pee Mak (2013) သည် IMDb 7.4 Google User 93% ဒါရိုက်တာ Banjong Pisanthanakun ရိုက်ကူးထား၍ Chantavit Dhanasevi, Nontra Kumwong တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Mario Maurer, Mai Davika Hoorne, Nattapong Chartpong တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Horror, Romance ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Mak ...
Srimanthudu (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Srimanthudu (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb Ratings : 7.7/10 Genre : Action,Drama,Romance Run Time : 2hr 38 mins Released Date : 7th Aug 2015 Language : Telugu ဒီတစ်ခါတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး အိန္ဒိယတောင်းပိုင်း မင်းသား မာဟစ်ရ်ှဘာဘူရဲ့ အက်ရှင်ကားတစ်ကား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ.... ဇာတ်လမ်းတော့ မပြောပြတော့ပါဘူး တစ်ခါလောက်ကြည့်ရုံနဲ့မာဟစ်ရ်ှကို သဘောကျသွားစေမယ့် ကားဖြစ်ပြီး မင်းသမီးလေးကလည်း အရမ်းချောပါတယ်( ) Ratinngs ခပ်မြင့်မြင့် ဇာတ်အိမ်ခိုင်မာတဲ့ ကားမို့Spoil ခံရမှာ မတန်ပါဘူး တစ်ခါတစ်လေ ဘေးက အကူမပါပဲ လမ်းလျှောက်မှ ကိုယ်တိုင်လမ်းလျှောက်ရတဲ့ အရသာကို သိပြီး ကိုယ်တိုင် လမ်းလျှောက်တတ်ပါတယ် ဒီလိုပါပဲ ဇာတ်လမ်းကို ကိုယ်တိုင်ခံစားပြီး မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးပေးကြရင်း... ကိုယ်ကြိုက်သလို ကိုယ်ခံစားလိုက်ကြပါလို့ ... ဘာသာပြန်နှင့် ပေါက်ကရအညွှန်းရေးသူ မြင့်သူ(ငှက်ကလေး-နည်းပညာ) Encoded By Thet Paing Oo 720p HD 400 MB (openload) 720p HD 950 MB ...
Reply 1997 (TV Series (2012–2013)) မြန်မာစာတန်းထိုး
Reply 1997 (TV Series (2012–2013)) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 8.5/10 Google Users 95% Reply 1997.... (တစ်​ခါက ဘဝ​လေး​တွေ) 2012 ရဲ့ ကြည့်ရှုသူနှုန်း rating အမြင့်ဆုံးနဲ့ Best Award များစွာဆွတ်ခူးရရှိထားခဲ့တဲ့ အကောင်းစား Drama တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် 2012 ရဲ့ သာယာလွန်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ လှပတဲ့ အကြောင်းတိုက်ဆိုက်မှုတစ်ခုအောက်မှာ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ တချိန်က ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာ ရင်းနှီးချစ်ခင်ပေါင်းသင်းလာခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စုရဲ့ လွန်ခဲ့သော 1997 အတိတ်က သူတို့၏ ကျောင်းသားဘဝ အမှတ်ရစရာ အခိုက်အတန့်တို့ကို ပြန်လည်တမ်းတ လွမ်းဆွတ်သတိရမိခြင်းအား... အခြေခံဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့ Reply 1997 ဟာ 1997 ခုနစ်က ကိုရီးယားအထက်တန်းကျောင်းသားတို့ရဲ့ဘဝက်ို ထပ်ဟပ်ပြသထားတဲ့ 1997 ခုနစ်သို့တမ်းခြင်း အဖြစ်အပျက်များကို ကြည့်ရှုခံစားရမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းတစ်ခုပါ. သည်ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ အဓိက ဇာတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ ShiWon ဆိုတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူလေးရဲ့ဘဝ.. ထိုခေတ်အခါက ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတို့၏ အသည်းစွဲ Kpop အဖွဲ့ HOT Boy Band အပေါ် သူမ၏ ရူးသွပ်စွာ ချစ်ခင်နှစ်သက်အားပေးမှုများဟာ မိမိချစ်ရဲ့တဲ့ Idol အပေါ် ရူးသွပ်စွဲလမ်းစွာ အားပေးကြတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတို့ရဲ့ ဘဝ ခံစားချက် အဖြစ်အပျက် အကြောင်းအရာတို့ကို အကောင်းဆုံး သိမြင်ခံစားကြည့်ရှုကြရမည့် Reply 1997 မှာ 2012 ရဲ့ ...
The Super Khiladi 3/Nenu Sailaja (2016) မြန်​မာစာတန်းထိုး
The Super Khiladi 3/Nenu Sailaja (2016) မြန်​မာစာတန်းထိုး ပထမဦးဆုံးအ​နေနဲ့ ပရိတ်​သတ်​ကြီးအတွက်​ ​တေလဂူ (အိန္ဒိယ​တောင်​ပိုင်း-Tollywood ကား)​လေးတစ်​ကားနဲ့ မိတ်​ဆက်​​ပေးပါရ​စေ ခင်​ဗျာ..... ဒီကားရဲ့ Generation မှာ Action,Comedy,Romanceဆို​ပေမယ့်​ တကယ့်​တကယ်​ အချစ်​ကားစစ်​စစ်​ဖြစ်​ပြီး Family ဘက်​ယိမ်းတဲ့ကားဖြစ်​ပါတယ်​ Ratings လည်း 7/10 ဆို​တော့ ​ပြောစရာမလို​အောင်​ ပြည့်​စုံ​နေပါတယ်​ ကျွန်​​တော့်​လို အချစ်​ကားအကြည့်​နည်းတဲ့သူ​တောင်​ ဒီကားကြည့်​ပြီး ထိခိုက်​ခံစားရပါတယ်​ လူငယ်​​တွေရဲ့ အချစ်​အ​ပေါ် ယုံကြည်​ပုံနဲ့ ဘဝမှာ မိသားစုသာ အ​ရေးအကြီဆုံးဖြစ်​​ကြောင်း မီး​မောင်းထိုးပြထားတဲ့ ကား​လေး ဖြစ်​ပါတယ်​ ​နောက်​ပြီး ကျွန်​​တော်​တို့ လို မိသားစုနဲ့ အ​နေ​ဝေးသူ​တွေ မိမိရဲ့ မိသားစုကို သတိရ တန်​ဖိုးနားလည်​သွား​စေမယ့်​ ကား​လေး တစ်​ကားလည်းးဖြစ်​ပါတယ်​ ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်း ငယ်​ဘဝကတည်းက မိမိချစ်​ခဲ့ရတဲ့ ​ကောင်​မ​လေးနဲ့ ပြန်​​တွေ့ တဲ့အချိန်​မှာ အရာရာ​ချော​မွေ့ အဆင်​​ပြေ​နေ​ပေမယ့်​ လက်​ထပ်​ယူဖို့ ဖွင့်​​ပြောမယ့်​ အချိန်​ကျမှ ရုတ်​တရတ်​​ပျောက်​သွားလို့ စိတ်​ပူ အလွမ်းပို​နေရတဲ့ ​ကောင်​​လေး ဟာရီ စိတ်​ပူပြီး ...
Goddess of Fire TV Series (2013– ) မြန်မာစာတန်းထိုး
Goddess of Fire TV Series (2013– ) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 7.1 Google User 91% ကိုရီးယား ချစ်သူများအတွက် စီးရီးလေးတစ်ခု ချစ်ခြင်းအားဖြင် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ Goddess of Fire TV Series (2013– ) သည် IMDb 7.1 Google User 91% ဒါရိုက်တာ : Park Sung-Soo, Jung Dae-Yoon ရိုက်ကူးထား၍ Kwon Soon-Gyu, Lee Seo-Yoon တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ Network: MBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် Episodes: 32 ပါရှိသော ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ကာ သရုပ်ဆောင် Geun-young Moon, Sang-yoon Lee, Bum Kim တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Drama, History, Romance ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ...
Chal Mere Bhai (2000) မြန်မာစာတန်းထိုး
Chal Mere Bhai (2000) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 4.7/10 Rotten Tomatoes 72% Google User 73 % Genre: Comedy, Romance Run Time:2hour 16 mins ချစ်သူတွေရဲ့အချစ် မောင်နှမတွေရဲ့ အချစ် သားသမီးနဲ့ မိဘတွေရဲ့အချစ် မေတ္တာဘွဲ့တွေလိုပဲ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ရိုက်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ Chal Mere Bhai (2000) သည် IMDb 4.7 Google User 72% ဒါရိုက်တာ David Dhawan ရိုက်ကူးထား၍ Ikram Akhtar, Ikram Akhtar တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Sanjay Dutt, Salman Khan, Karisma Kapoor တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Romance ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ...
ATM: Er Rak Error (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
ATM: Er Rak Error (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး ATM: Er Rak Error (2012) သည် IMDb 7.3 ဒါရိုက်တာ Mez Tharatorn ရိုက်ကူးထား၍ သရုပ်ဆောင် Chantavit Dhanasevi, Preechaya Pongthananikorn, Anna Chuancheun တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Romance ထိုင်းဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Sua (Ter - Chantavit Dhnasevi) နဲ့ Jib (Ice - Preechaya Pongthananikorn) တို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်က တခြားသူတွေလို ရိုးရိုးချစ်သူစုံတွဲပါပဲ ဒါပေမယ့် သူတို့ တွဲခုတ်နေတာကို ၅ နှစ်ကြသည်အထိ ဘယ်သူမှ အသိမခံလျှို့ဝှက်ထားရသည့်အကြောင်းမှာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ပေါ်လစီအရ သမီးရည်းစားစုံတွဲမထားရ ထားမိ၍ လက်ထပ်ပါကလည်း တစ်ယောက်က အလုပ်ထွက်၍ ...
The Island (2005) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Island (2005) မြန်မာစာတန်းထိုး The Island (2005) သည် IMDb 6.9 Google User 83% ဒါရိုက်တာ Michael Bay ရိုက်ကူးထား၍ Caspian Tredwell-Owen, Alex Kurtzman တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Scarlett Johansson, Ewan McGregor, Djimon Hounsou တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Romance ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. အနာဂတ်ရိပ်မြုံနယ်မြေတစ်ခုမှာ နေနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့ သူငယ်ချင်းက ကမ္ဘာမြေမှာ ရေဒီယိုသတ္တုကြွမရှိတဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်းကို သွားဖို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါ သူရဲ့ ကန့်သက်ခံရတဲ့တည်ရှိမှုကို မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာလေရာ ဘယ်လိုအက်ရှင်စွန့်စားခန်းအချစ်ဇာတ်လမ်းတွေ တွေ့ရမလဲ ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါခင်ဗျာ…. Review By Win Kyaw Thu Fixed & Synced By ...
Andaz Apna Apna (1994) မြန်မာစာတန်းထိုး
Andaz Apna Apna (1994) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 8.2/10 Google User 91% Genre: Comedy, Family, Romance Run Time:2hours 40 mins Andaz Apna Apna (1994) သည် IMDb 8.2 62% Google User 91% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Rajkumar Santoshi ရိုက်ကူးထားပြီး Rajkumar Santoshi , Rajkumar Santoshi တို့ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ Aamir Khan, Salman Khan, Raveena Tandonတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Family, Romance ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ….. လူငယ်လေးနှစ်ဦး အမွေရမယ့် သူဌေးသမီးတစ်ဦးကို အပြိုင်ပိုးကြရင်း သူ့ကို ရာဇ၀တ်ကောင်တစ်ဦးလက်မှ ကယ်တင်ကြသူများအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားပုံကို ကြည့်ရင်းပါးစပ်မပိတ်ရမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းဟာသကားကို ခံစားကြည့်ရှုလိုက်ာကြပါဦးခင်ဗျာ… Reviewed By Win Kyaw Thu Translated by Win Kyaw Thu Encoded by Win ...